YoYarLay - သင်တန်းမတက်ဘဲ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး တိုးတက်လာစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၆)သွယ်
ဒါပေမဲ့ ပြောဆိုလို့သာ ပြောလိုက်တယ်.. သူများပြောတာလည်း ကိုယ်နားမလည်၊ ကိုယ်ပြောချင်တာကိုလည်း ဘယ်လိုပြောရမယ်မှန်းမသိ၊ ပြောမယ့်ပြောတော့လည်း ကိုယ်ပြောချင်တာတွေချည်း ပြောချ ဆိုရင် မဟုတ်သေးဘူး မလား...
ဆိုကြပါစို့.. အပြင်မှာ ခင်ဗျားနဲ့တွေ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားက "How are you doing?" လို့ မေးတဲ့အခါ ခင်ဗျားက "I'm talking with you" တွေ ဘာတွေ ပြန်ဖြေနေရင် ဂွမ်းပြီလေ… ဟုတ်တယ်ဟုတ်? အနည်းဆုံးတော့ ဘာက နှုတ်ဆက်စကား၊ ဘာက မေးခွန်း ဆိုတာလောက် သိထားဖို့တော့ လိုတာပေါ့ … ဒီအတွက် လေ့ကျင့်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေရှိနေပြီး လွယ်လည်း လွယ်ပါတယ်။
၁။ အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးရုပ်ရှင်တွေ များများကြည့်ပါ
အင်္ဂလိပ်ကားတွေ ဒိုင်ခံကြည့်ပါ။ ဗြိတိန်က ရိုက်ရိုက်၊ အမေရိကားက ရိုက်ရိုက်၊ ဟောလိဝုဒ်က ရိုက်ရိုက်၊ ဟောင်ကောင်ကပဲ ရိုက်ရိုက်၊ တရုတ်ကပဲ ရိုက်ရိုက် နောက်ဆုံး “မုဒြာခေါ်သံ”ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ ရုပ်ရှင် မှန်သမျှ အကုန်ကြည့်ပါ။ ဒီလိုဆို Accent လို့ခေါ်တဲ့ လေယူလေသိမ်း အမျိုးမျိုးဟာ နားထဲမှာ ရင်းနှီးလာပါလိမ့်မယ်။ Key Words လို့ခေါ်တဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေထဲက ဘာက အရေးကြီးတာလဲဆိုတာကို ဖမ်းမိအောင်ကြိုးစားရင်း Keywords တွေ ကြားလာပြီဆို စကားတစ်ခွန်းလုံးက ဘာကိုပြောချင်တာလဲ ခန့်မှန်းမိလာပါလိမ့်မယ်…။
၂။ စကားပြောတွေကို နားထောင်တဲ့အခါ အသုံးများတတ်တဲ့ Idioms တွေကို နားထောင်ပါ
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပေါ့။ How are you doing တို့၊ Break the ice တို့ စသဖြင့်သော အသုံးများတဲ့ Idiom အသုံးလေးတွေကို နားလည်အောင် နားထောင်ပါ။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို သုံးတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ စကားလုံးချင်း တူပေမဲ့ သုံးတဲ့ ကာလံ၊ ဒေသံ၊ အဂ္ဂံ၊ ဓနံကို လိုက်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲသွားတတ်တာလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။ နားထောင်ရင်း နားထောင်ရင်း အကျင့်ရလာတဲ့အခါမှာ အပြင်မှာ ပြောတာတွေကိုလည်း အလိုလို နားရည်ဝပြီး နားလည်လွယ်လာပါလိမ့်မယ်။
စာအုပ်လို့ဆိုရာမှာ စစချင်း “Gone with the Wind” တို့လို စာအုပ်အကြီးကြီးတွေ ဖတ်ရမယ်လို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆို အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေ စကိုင်ဖြစ်တာ “Harry Potter” စာအုပ်တွေကနေပါ။ ကိုယ်သဘောကျလွန်းတဲ့အချိန်မှာ ဘာသာပြန်ကလည်း မထွက်နိုင်၊ ထွက်တဲ့ ဘာသာပြန်ကလည်း နာမည်တွေလွဲ (ပေါ်တာခေါင်းတွေ သိပါလိမ့်မယ်) ဆိုတော့ မတတ်နိုင်တော့တဲ့အဆုံး မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုကို စကိုင်ရပါတယ်။ နဂိုကတော့ ဖတ်ရမှာ ကြောက်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အပြင် ရေးထားတာကလည်း ထင်သလောက် မရှုပ်ထွေးတာမို့ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားလောက်မယ့် စာအုပ်ကို စပြီးဖတ်ပါ။ လွယ်တဲ့ စာအုပ်ကို အရင်ကိုင်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အကျင့်ရပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အိုခေသွားပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံးတော့ ဖတ်ရမှာ မကြောက်ပါနဲ့လို့…။
၄။ Dictionary မသုံးပါနဲ့
စာအုပ်လည်း ဖတ်ခိုင်းသေးတယ်၊ Dictionary လည်း မသုံးခိုင်းဘူးဆိုတော့ ထူးဆန်းကောင်း ထူးဆန်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ပြောနေတာပါ။ Dictionary ကို မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတွေကလွဲပြီး သိပ်မသုံးပါနဲ့။ စကားလုံးတစ်လုံးကို မသိနေဘူးဆိုရင်တောင် အဲဒီစာလုံးကို ကျော်ပြီး စာကြောင်းဆုံးအောင်ဖတ်သွားပါ။ တစ်ကြောင်းလုံးဆုံးမှ ဒီစာကြောင်းက ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပါ။ ဒီနည်းနဲ့ ကိုယ်ကျော်ချသွားတဲ့ စကားလုံး အဓိပ္ပာယ်ကို ခန့်မှန်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ Dictionary ကြည့်တာထက် အားသာတာက ဒီနည်းလမ်းဟာ စာလုံးချင်း အတူတူတောင် စာကြောင်းပေါ်လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးကို ဖော်ဆောင်နိုင်တာ၊ မှတ်မိနိုင်တာပါပဲ။
ဒါကတော့ ကိုယ်ဘာကို လိုချင်တာလဲဆိုတဲ့ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ ဖတ်ရင် အသံထွက်ဖတ်တာမျိုး မရှိသလိုပေါ့…. စိတ်ထဲကပဲ ဖတ်တာက အဓိပ္ပာယ်ကို ပိုနားလည်စေသလို စကားလုံး အဓိပ္ပာယ်တွေကိုလည်း ပိုပြီး ဖော်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အသံထွက်ဖတ်လိုက်ရင်တော့ အသံထွက်ကိုပဲ အာရုံစိုက်မိနေမှာဖြစ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ နားလည်လိုက်မှာ မဟုတ်သလို စကားလုံးတွေကိုလည်း လေ့လာနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အသံထွက်ကို အဓိက ကျင့်ချင်တာ၊ အဓိပ္ပာယ် နားလည်လည် မလည်လည် ကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်တော့ အသံထွက်ဖတ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်တစ်ခု ကျွန်တော် အရှေ့မှာ ပြောခဲ့သလိုပေါ့.. ဘာသာမပြန်ပါနဲ့။ အင်္ဂလိပ် ဝတ္ထုတွေ ဖတ်ရင် အင်္ဂလိပ်လို နားလည်အောင် ကြိုးစားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာချင်တာကတော့ မကြောက်ဖို့ပါ။ ဘာအကျင့်လဲတော့ မသိဘူးဗျ.. နိုင်ငံခြားသားတွေကို မြင်ရင် အားနေ ကြောက်နေတာမျိုး ကျွန်တော် ခဏခဏ မြင်ဖူးတယ်။ ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ ပြောစရာရှိတာ ရဲရဲပြောပါ။ လူကိုလည်း မကြောက်ပါနဲ့။ စကားပြောရင်း မှားမှာကိုလည်း မကြောက်ပါနဲ့။ မှားရင် ပြင်စရာနည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ လူလူချင်းလည်း ကြောက်စရာမှ မလိုဘဲနော်… အေးဆေးပေါ့…
ဒါတွေကတော့ လက်တွေ့အသုံးဝင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းအချို့ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ပြောပြ၊ ပြောပြ တကယ်လေ့လာမှ တကယ်တတ်မှာမို့၊ တကယ်ကျွမ်းကျင်လာမှာမို့ လေ့ကျင့်မှုကသာ အရေးအကြီးဆုံး လို့ ထပ်ဆောင်းပြောပါရစေ။ စကားပြောတတ်ချင်တာဆို စကားစပြောမှ ပြောတတ်မှာပါ။ စကားလုံးတွေကို စိတ်ထဲမှာ စုဆောင်းနေလို့ စကားအဖြစ် အလိုလို ထွက်မလာပါဘူး။ တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုလည်း လေ့လာမှ ဖြစ်မှာမို့ တကယ်ကြိုးစားပြီး အဟုတ်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ… ။